पूर्व राजाहरुले प्रयोग गरेको श्रीपेचको मूल्य कति होला ? हेर्नुस – Online Khabar 24
पूर्व राजाहरुले प्रयोग गरेको श्रीपेचको मूल्य कति होला ? हेर्नुस
September 26, 2021 by admin admin
शुक्रबार नारायणहिटी संग्राहलयमा राखिएको श्रीपेच चो’रीको प्रयास भयो।
हुन त प’क्राउ परेका आरो’पीले श्रीपेच लगाएपछि राजा हुन्छु भनेर श्रीपेच राखेको शोकेस फुटा’उन खोजेको बयान दिए।
यहाँ हामी उक्त श्रीपेचको मूल्य कति पर्छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौं। नेपालमा कुनै समय राजाहरुको शा’सन थियो। तर, गणतन्त्र पश्चात् जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्छन्। तर, नेपालमा शाहवंशीय राजाहरुको शासन सकिएको वर्षौं हुँदा पनि यसबारे बहस चलिरहेको छ।
तत्कालीन राजाहरूले राज्याभिषेक गर्दा वा राजग’द्दीमा बस्दा टाउकोमा श्रीपेच पहिरिने चलन थियो। यो चलन रोमन संस्कृति हो। नेपालमा यो परम्परा कहिले भित्रियो भन्ने तथ्य यकिनका साथ भन्न सकिँदैन। देशमा गणतन्त्र स्थापनासँगै शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वि.सं. २०६५ साल जेठ २ गते तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई श्रीपेच जिम्मा दिए।
उक्त समयमा बन्द कोठामा राखिएसँगै त्यसलाई नेपाल सरकारले असु’रक्षित हुने महशुस गर्दै बिमा गर्ने प्रक्रियाअघि बढायो। तर, मूल्य तय हुन नसक्दा श्रीपेचको बिमा गर्ने काममा अव’रोध आयो।
हुमायो चरा संसारबाटै लो’प हुन लागेको छ। त्यसैले श्रीपेचको पुन र्निर्माण गर्न असम्भव रहेकाले अहिले पनि सरकारलाई मूल्य निर्धारण गर्न समस्या भएको छ। बिमा गर्ने भनेको क्ष’तिपछि त्यसलाई पुन र्निर्माणका लागि हो। हुमायो संसारबाटै लो’प हुने चरणमा छ, जसकारण प्वाँख पाउन सकिँदैन। त्यसैले श्रीपेच फेरि बनाउन असम्भव छ।
अहिले नारायणहिटीमा राखिको श्रीपेच राजा वीरेन्द्रको राज्य अभिषेकको समयमा बनाइएको बताइएको छ। यसको डिजाइन प्रेमलाल श्रेष्ठले गरेका हुन्। मूल्य तोक्न नसकिने भएर बहुमुल्य मात्र भनिएको श्रीपेचको सर’क्षामा पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।
‘यो एकदमै बहुमूल्य वस्तुबाट बनेको छ, यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्न अति नै आवश्यक देखिन्छ,’ एक संस्कृतिविद् भन्छन्। यो खबर अनलाइन नेपालबाट साभार गरियको हो ।
Prevबिहान उठ्ने बित्तिकै यी काम गर्नुहोस – सधै फलीफाप हुनेछ !
next३४ र ३७ वर्षीय दुइ युवा पक्राउ, फेसबुक मार्फत् गर्ने रैछन यस्तो गर्नै नहुने काम !